Channel Myanmar Update: April 2014
Posted by Channel Myanmar Update at 00:46 No comments:
Speed (1994) မြန်မာစာတန်းထိုး
Matrix မင်သားကြီး Keanu Reeves နဲ့ မင်းသမီးကြီး Sandra Bullock တို့ နုစဉ်က
အစွမ်းပြထားပြီး IMDb Rating 7.2 ရရှိထားတဲ့
ဒီဖက်ခေတ် ဇာတ်ကားတွေမှာ သိပ်မတွေ့ရတော့တဲ့ ယုတ္တိရှိရှိဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်နဲ့
(ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြိုက်လွန်းလို့ ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ...
Zawgyi One Font နဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည့်ရှုသူအပေါင်း အာရုံမနောက်စေရန်
စာတန်းထိုးကို တစ်ခါတည်းပေါင်းပေးထားပြီး File size ကိုသေးစေချင်လို့ Movie ကို
360p Quality နဲ့ပဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...ဇာတ်အိမ်ခိုင်ခန့်ပြီး virtual effect တွေသိပ်မပါတဲ့အတွက်
Quality ကိုအဓိက ထားပြီးမတင်ပေးတော့ပါဘူး...
ပထမဆုံး ဘာသာပြန်အတွေ့အကြုံ ဖြစ်သောကြောင့်
အမှားအယွင်း နှင့် လိုအပ်ချက်များရှိခဲ့ပါက ကျွန်တော့်၏အားနည်းချက်သာဖြစ်ကြာင်း
Zip File size...496MB
Posted by Channel Myanmar Update at 00:44 No comments:
My Girlfriend Is an Agent (2009) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb Rating (6.5) ရရှိထားတဲ့ Korea ဟာသ၊အက်ရှင်၊ဒရမ်မာ ဇာတ်ကားပါ...
Korea ကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ဒရမ်မာ ကွက်လေးတွေကိုဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့
တင်ပြထားသလို..ဟာသကွက်လေးတွေကိုလည်း ထိထိမိမိ ပုံဖော်ထားနိုင်ပါတယ်...
Posted by Channel Myanmar Update at 00:41 No comments:
Posted by Channel Myanmar Update at 00:39 No comments:
The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဒီတစ်ခါတော့ အများမျှော်လင့်နေကြတဲ့ The Hobbit ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီကားက Lord of the Rings Trilogy ရဲ့ Prequel ဖြစ်ပြီး The Hobbit Trilogy ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကားမှာ Lord of the Rings ထဲက မင်းသားချော Orlando Bloom က Legolas အဖြစ်ပြန်လည်ပါဝင်လာပြီး၊ အခြား ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေလည်း အများအပြားပါဝင်လာပါတယ်။ ပထမဇာတ်ကား အစပိုင်းမှာ Dwarf တွေရဲ့ ရတနာတွေ ကြောင့် နဂါးကြီးတစ်ကောင်က Dwarf တွေ မြို့ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက် ခဲ့သလို Dwarf တွေလည်း သူတို့ရဲ့ မြို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပါတယ်။
ဒီကားမှာ Dwarf တွေက Gandalf နဲ့ Bilbo (Frodo ရဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူ) ရဲ့အကူအညီနဲ့ သူတို့ မြို့ထဲကို ခိုးဝင်ပြီး နဂါးကြီးစောင့်ကြပ်နေတဲ့ ရတနာတွေထဲက Dwarf ဘုရင် ရဲ့ ရတနာ ဖြစ်တဲ့ Arkenstone ကို ၀င်ခိုးရမှာဖြစ်ပြီး၊ ဒီရတနာရှိမှသာ တခြား Dwarf တွေကို ဆင့်ခေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကားက ထုံးစံအတိုင်း Action/Adventure ပုံစံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီး လိုရာခရီးကို
သွားရင်းနဲ့ အန္တာရာယ်ကြုံတွေ့တာတွေ၊ စွန့်စားခန်းတွေ၊ ကို အဓိကတင်ဆက်ထားပါတယ်။
The Lord of the Rings ကားတွေ ရော Hobbit ပထမကားကို ရိုက်တဲ့ ဒါရိုက်တာပဲဖြစ်တာကြောင့်အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဒီ LOTR နဲ့ Hobbit ဇာတ်ကားတွေက ၀တ္ထုကို ရုပ်ရှင် ပြန်ရိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေမှာ ပရိတ်သတ်အားပေးမှုအများဆုံးရတဲ့ကားတွေဖြစ်ပြီး၊ မူရင်း ဇာတ်လမ်းရဲ့ ရသကို မပျက်အောင် ထိန်းထားနိုင်လောက်အောင်ကောင်းပါတယ်။
ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပေမယ့် LOTR နဲ့မရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက် ကတော့ အနည်းငယ် ပျင်းစရာကောင်းပါတယ်။ ဒီကားက ပထမကားနဲ့ ယှဉ်ရင် အနည်းငယ်နှေးမှာဖြစ်ပြီး၊ သူက တတိယကားကို အစပျိုးပေးထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တာကြောင့် တတိယကားက အကောင်းဆုံး ကားတစ်ကားဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီကားမှာဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးက တတိယကားမှာ မှ သွားအဆုံးသတ်မှာဖြစ်တာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ မတင်မကျဖြစ်အောင်လုပ်ထားခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် LOTR ရဲ့ အဓိက Villain ကြီး ဖြစ်တဲ့ Sauron ( The Dark Lord) က Bilbo ကြောင့် ပြန်လည် နိုးထလာပြီဖြစ်ပြီး၊ ဒီကားရဲ့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းအနေနဲ့ Sauron နဲ့ Gandalf တို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။
အကောင်းဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ Prisoners လိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုး၊ The Dark Knight Rises လို ခံစားချက်မျိုး မရနိုင်ပေမယ့်၊ Adventure ကားတွေထဲမှာတော့ ဒီနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးကားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
(အညွှန်းကို ရုပ်ရှင်မိတ်ဆက်(Movie Review) မှကူးယူဖော်ပြပါသည်...)
Zip File size...958MB (WinRAR ဖြင့်ဖြည်ပါ)
Posted by Channel Myanmar Update at 00:35 No comments:
Final Destination5(2011) မြန်မာစာတန်းထိုး
သေမင်းလက်ကနေ ဆဌမ အာရုံကြောင့်လွတ်လာပေမယ့် ...
ဘယ်လိုတွေပြန်ကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားပါ..
ထိတ်လန့်စရာတွေကို သေသေချာချာရိုက်ပြထားတာကြောင့် ကြည့်နေရင်းနဲ့
လန့်အော်ရမယ့်ဇာတ်ကားပါ...Final Destination ဇာတ်ကားတွေကို ပုံစံတူတူနီးပါး
ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့ပေမယ့် ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် မရိုးသလိုခံစားရတဲ့ဇာတ်ကားပါ...
Zip File size...600MB
Posted by Channel Myanmar Update at 00:25 No comments:
Journey2:The Mysterious Island (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
Adventure ဆန်ဆန် စိတ်ဝင်စားဖွယ် မိသားစုဇာတ်ကားလေးပါ....
Virtual Effect တွေကို သေသေသပ်သပ်ဖန်တီးထားတာမို့
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဟာသဆန်ဆန် စွန့်သားခန်းတွေနဲ့မို့လို့
Zip File size...569MB
Posted by Channel Myanmar Update at 00:19 No comments:
Brave (2012) မြန်မာစာတန်းထိုး
ဇာတ်လမ်းရော Animation ရော ပြောစရာမရှိအောင် အထူးကောင်းမွန်ပါတယ်......
အက်ရှင်၊ ဒရမ်မာ အစုံ ပါပြီး၊ သားအမိကြားကမေတ္တာ၊ သားသမီးအတွက် အသက်ကိုပင် ဂရုမထားတဲ့ မိခင်မေတ္တာကို ထင်ဟပ်ထားနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ.....
Zip File size...612MB
Posted by Channel Myanmar Update at 00:13 No comments:
Every Child is Special (2007) မြန်မာစာတန်းထိုး
IMDb Rating (8.6) ရရှိထားတဲ့ မိသားစုတိုင်းကြည့်ရမယ့်ဇာတ်ကားလေးပါ...
3 Idiots မင်းသား Aamir Khan ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူး/သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားပါ...
အကြင်နာတရားကင်းမဲ့တဲ့ အပြိုင်အဆိုင်ကမ္ဘာ ကြီးမှာလူတိုင်းက ထိပ်တန်းတွေ
အကောင်းဆုံးတွေချည်း မွေးချင်နေကြပေမယ့် ကလေးလေးတွေကတော့ သူ့အတွေး
ရသအမြောက်ဆုံးဇာတ်ကားတစ်ကားပါ...အရာအားလုံးကို ပုံသေကားချပ် နလပိန်းတုံးတစ်ယောက်လို
တွေးတောနေလို့မရဘူးဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာ ပြသွားတာကိုကြည့်ရင်း ကျွန်တော် ဖတ်ဖူးတဲ့ ဥပမာ တစ်ခုကိုသတိရမိပါတယ်....
- တြိဂံ တစ်ခုရဲ့ အတွင်းထောင့်အားလုံးပေါင်းခြင်းဟာ 180 ဒီဂရီ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ သင်ခဲ့ဖူးပါတယ်..
ကြမ်းပြင်မှာ တြိဂံ တစ်ခုဆွဲပါ..တိုင်းပါ..အတွင်းထောင့်အားလုံးပေါင်းခြင်းဟာ 180 ဒီဂရီပါ..
မှန်ပါတယ်...ဒါဆိုရင် သင့်ကို မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း၊ အမေရိကန်၊ဂျပန် ကိုဆက်ထားတဲ့ တြိဂံပုံစံ တံတား
တစ်ခုဆောက်ခိုင်းပါမယ်...သင်က အတွင်းထောင့်အားလုံးပေါင်းခြင်းကို 180 ဒီဂရီဖြင့်တွက်ပါမယ်...
တံတားကိုဆောက်ပါပြီ...တံတားက တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အဆင်ပြေပြေ ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းတန်း
အဖြေကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာ ဟာအလုံးကြီးပါ...ဘောလုံးလို အခုံးမျက်နှာပြင်ပေါ်က တြိဂံတစ်ခုရဲ့
အတွင်းထောင့်တွေပေါင်းခြင်းဟာ 180 ထက်ကြီးပါတယ်...
(ဒီထက်ပိုပြီးလေ့လာချင်ရင် Einstein's Theory of General Relativity ကိုလေ့လာသင့်ကြောင်းပါ)
-ဒီဇာတ်ကားရဲ့ စာတန်းထိုးဖိုင်ကို Zawgyi One Font နဲ့ရိုက်ထားတဲ့အတွက် Video Player ရဲ့ Subtitle setting မှာ Font ကို Zawgyi One Font ပြောင်းပြီးမှကြည့်ကြပါခင်ဗျာ...
(ဒီဇာတ်ကားကို ကြိုက်လွန်းလို့ ကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်ခဲ့သော ညီလေး ညီသံလွင်
Zip File size...989MB
subtitle....မြန်မာစာတန်းထိုး(Zawgyi One Font ဖြင့်ကြည့်ပါ)
Posted by Channel Myanmar Update at 00:09 No comments:
The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) မြန်မာစ...
Journey2:The Mysterious Island (2012) မြန်မာစာတန...